တရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်း အားသွင်းကိရိယာ Provider Energy Monster က “EM” ကို Nasdaq တွင် စာရင်းသွင်းမည် - Pandaily
Categories: Industry ကိုLucia Si ဧပွီ 2, 2021 ဧပွီ 2, 2021 မှာ Posted
အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာ များကို အမေရိကန်အခြေစိုက် Eartho Stock Expo (ADS) က ၁၀ ဒေါ်လာဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရှယ်ယာတစ်စု လျှင် ဒေါ်လာ ၈,၅၀ အထက် ဈေးနှုန်းရှိသည့် ADS ၏ ပထမဆုံး လူသိရှင်ကြား ရှယ်ယာ (IPO) က ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
The Conjuring Book Show တှငျ Energy Monster ၏ အဓိက ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူမြား ပါဝငျကာ High Capital Group, Asia Spex Management (HK). နှငျ့ Xiaomi Technology တို့က စုစုပေါငျး သိနျး ၁၁၀ ပေးသှငျးရနျ ရညျရှယျထားကွသညျ။
Energy Monkey ဖော်ထုတ်ရာတွင် IPO မှ ကောက်ခံသော ငွေကြေး၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို အားသွင်းကိရိယာတွင် ထပ်မံအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အားသွင်းကိရိယာတွင် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး ထူးချွန်သော အရည်အချင်းများကို စွဲဆောင်ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အသုံးပြုမည့် စက်ကိရိယာများကို အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မိုဘိုင်းပါဝါအပြင် အလားအလာရှိသော မိတ်ဖက်များကို ရှာဖွေနေကြသည်။
Energy Monk ကို ၂၀၁၇ ခုနှဈ မလေမှာ ရှနျဟိုငျးမှာ စတငျတညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့တညျထောငျသူတှထေဲမှာ အမရေိကနျမဈရှငျ၊ ပါရမီရှငျအဆငျ့နဲ့ အလီဘာဘာရဲ့ ဝနျထမျးဟောငျးတှေ ပါဝငျပါတယျ။ ကုမ်ပဏီတညျထောငျသူနှငျ့ စီအီးအို Chua Gwang သညျ ယခငျက Uber ၏ Headming Director နှငျ့ National Marketing Director အဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ဖူးသညျ။
၂၀၂၀ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာ ၃၁ ရကျအထိ ကုနျသှယျလုပျငနျးခှနျကောကျခံမှုကှနျရကျကို မြှဝသေုံးစှဲမှု စုစုပေါငျး ၆၆.၄ သနျးကြျောရှိပွီး ကိုယျပိုငျမှတျစုတှေ စုပုံထားတဲ့ သုံးစှဲသူတှကေို ဆှဲဆောငျမှု စုစုပေါငျး ၂၁၉ သနျးရှိပါတယျ။
High Village Capital Group ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Shok Yongqing က “Energy Monk က အရမ်းသန်စွမ်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ “ တစ်ကိုယ်ရေလျှပ်စစ်ဓါတ်အားများ အကြီးအကျယ် ကျဆင်းသွားခြင်းသည် ဘဏ်လုပ်ငန်း အသုံးမပြုဘဲ အလေအလွင့်များ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်များကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်းဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံး၏ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချခြင်းကို ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်သည်” ဟု ဆိုသည်။
Jurch Book တွင် ဖော်ပြထားသည့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အဓိက ဝင်ငွေအဖြစ် ၎င်း၏ မိုဘိုင်းဖုန်း ကိရိယာများမှ ငွေသွင်းသည့် လုပ်ငန်းထက် ဝင်ငွေ၏ ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပိုများသည်။ ယင်းကုမ္ပဏီသည် ခြောက်ဘီးငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ပေးအပ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း၌ Alibaba နှင့် CMC တို့က မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ ယခုနှစ်ဆန်းတွင် ပြီးစီးခဲ့ပြီး ငွေကြေးပမာဏသည် သန်း ၂၀၀ ကျော်ရှိခဲ့သည်။
Topics: မွငျကှငျးChina Power Bank မှ ငှားရမ်းထားသော Energy Monster ကုမ္ပဏီက အမေရိကန်တွင် စာရင်းဝင်ရန် ရည်မှန်းထား
ဒီကုမ္ပဏီဟာ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ပုံတစ်ခုတည်းကြောင့် မကြာခဏ ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ ဒါကို Energy Monkey လို့ အမညျပေးထားတဲ့ အရကျအသဈတဈမြိုးဖွဈတဲ့ Kai You (ချေါ) Line တံဆိပျကို အှနျလိုငျးကနေ ဝယျယူရရှိနိုငျပါတယျ။ ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခု ထူထောင်ဖို့တောင်မှ ဌာနကတာဝန်ယူပြီး သစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီပါ။
အနာဂတျဖှံ့ဖွိုးရေးစီမံကိနျးတှအေတှကျ ကုမ်မဏီတှေ၊ ကုမ်မဏီတှကေို ဦးစားပေးမှာမဟုတျပမေဲ့ စီးပှားရေးသမားတှနေဲ့ စီးပှားရေးသမားတှရေဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို ထညျ့သှငျးစဉျးစားမယျလို့ Chua က ပွောပါတယျ။
လျှပ်စစ်အရောင်းပြခန်းများ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကဲ့သို့ ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်မည်ကို ပြည်သူများက စိုးရိမ်နေကြသည်ဟု မစ္စတာ Chua က ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ကုမ္ပဏီကြီးများက ဈေးမမြှင့်ခဲ့ပေ။ သူတို့ရဲ့ နညျးဗြူဟာက ကှဲပွားခွားနားတဲ့ ဈေးနှုနျးတှနေဲ့ ဈေးကစားကှကျတှကေို လိုကျလြောညီထှေ ဖွဈစမှောပါ။
ထိုက်ထိုက်သည် ထိုနေ့တစ်နေ့တည်းမှာပင် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနတွင် စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး အခြားမိုဘိုင်းဖုန်း အားသွင်းစက် နှစ်လုံးကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကာ လမ်းလျှပ်စစ် (ဝါ) လျှပ်စစ်(ဝါ) လျှပ်စစ်(ဝါ) တရားဝင်ပူးပေါင်းပံ့ပိုးခဲ့သည်။ သညျကွညောခကျြဟာ အသဈဖှဲ့စညျးလိုကျတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးပေါငျး ၃.၆ သနျးကို ခံစားစမေယျ့အပွငျ လုပျငနျးရဲ့ အကွီးမားဆုံးဈေးကှကျဝစေုဖွဈတဲ့ အျောဒါပေါငျး ၃ သနျးကို အလုအယကျ ရယူလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
ကိုPandaily Apr 12 Apr 12 မှာ Posted
၅၈ ကြိမ်မြောက် ကွန်ရက်စီအီးအိုကို လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့တွင် မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ယွမ်သန်း ၄၀ ဒဏ်ငွေဆောင်ရန် တောင်းဆို
၅၈. Web စီအီးအို Yao Yao Yao Ying Wave က ဧပြီ ၁၀ ရက်တွင် ၎င်း၏ မိတ်ဆွေများ အဝိုင်းအတွင်း ၎င်း၏ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူ North Western (China Leader Online Estate Platform) အား လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု ဆန့်ကျင်သည့် ဒဏ်ငွေ ယွမ် သန်း ၄၀ ချမှတ်ခဲ့သည်။